BAKHAARLIHII SAACADDIISII KA LUNTAY | Salaan Media
Home Articles BAKHAARLIHII SAACADDIISII KA LUNTAY
BAKHAARLIHII SAACADDIISII KA LUNTAY
Nin bakhaarley ah ayaa saacddiisii gacanta kaga dhex lunyey bakhaarkiisii , markii larogaayey jawaanadii raashinka ahaa , saacaddan oo aheyd mid aan caadi aheyn , oo qiimo weyn ugu fadhidey (dhaxal aheyd) , meel kasta bakhaarkii wuu ka raadiyey , wakhtiti badanna way ka qaadatey , qoladii xamaaliinta aheydna way la doondooneen , laakiin kuligood way ka quusteen inay helaan .
Wuxuu arkey inamo yaryar oo meel agtiisa ah kubbad ku ciyaaraaya , markaasuu u tegey , oo ka codsadey ,iney caawiyaan oo la doondoonaan saacaddiisii oo bakharka kaga dhex luntey , waxay yaryarkii kolba meel ka raadiyaanba , way waayeen ,waanay ka quusteen .
Ninkii oo quus kataagan saacddii in lahelo , ayaa inan yar oo inamii ka mid ah ,ayaa ka codsadey inuu keligii u ogolaado inuu mar kale ku noqdo bakhaarka , oo saacaddii soo raadiyo .
Ninkii bakhaarleyda ahaa ayaa inankii yaraa HOOS u eegay , isaga oo iswaydiinaaya , aniga iyo xamaaliintii waawaynayd iyo caruurihii faraha badnaaba waxaanu waynay ee ka quusanay ee maanta oo dhan aanu raadinay nay , ma a uyuu kan yari isku deyayaa , waar bal amuurtan arkoo maqloo kaalaya .
wuxuu ku yidhi :waayee bal ha raagin .
Wakhti yar kabacdi , ayaa kii yaraa bakhaarkiika soo baxay , isaga oo SAACADDII caganta ku sida .
Ninkii badhaarleyda ahaa aad buu u farxay , isaga oo inankii yaraa la yaaban , ayaa waxa uu waydiiyey : SIDA UU KU HELEY SAACADDA ?
EE UU UGU GUULAYSTEY INUU KELIGII HELO ? iyada oo DADKII OO DHAMI AY WAAYEEN ? OO AY KU GUULDARAYSTEEN INAY HELAAN .
Inankii yaraa ayaa waxa uu ugu jawaabey :MARKAAN BAKHAARKA GALEY , DHEXDIISA AYAAN ISKA FADHIISTEY , DABADEEDNA WAXAAN DHEGEYSTEY SANQADHII (TIKTAK) SAACADDA , wax yar kabacdina waxaan maqley sanqadheedii(tiktak) , halkii sanqadhu (tiktak) ka baxaysay ayaan u kacay , dkabacdina halkii baan ka helay .
Hadaba waxan aynu raadinayno sida (ICTIRAAFKA) (HORUMARKA +XALINTA KHILAAFAADKA JOOGTADA AH +SAWAXANKA SIYAASADEED +WAR SAXAAFADEED YADAN BADAN EE AAN QIIMAHA LAHAYN ……..
Waa inaynu wax dhageysanaa (xukuumaddu shacabka degeysataa mid yar iyo mid wayn ba) , waxna fahanna , garaadna la nimaadnaa , xilkuna waa mas uuliyad , waana lagula xisaabtami doonaa .
Hadaba CAQLIGA caafimaadka kabaa , ee deggani , wuu FEKERI karaa , waxna wuu dhegeysan karaa , sidaa daraadeed haysla WAYNAAN ee wax dhegeyso
Adiguna bal naftaada iyo cqaligaaga wakhti sii , si aad si wanaagsan ugu FEKERTO . waxna u dhegeysato .